Abanavalo ngeDowns abeBucs - Ilanga News
Home Ezemidlalo Abanavalo ngeDowns abeBucs
Abanavalo ngeDowns abeBucs
UZinnbauer uthi abalandeli bayayifuna neyeNedbank
Umqeqeshi uJosef Zinnbauer.
UMQEQESHI we-Orlando Pirates uJosef Zinnbauer udalula okufunwa ngabalandeli bale kilabhu kuyena uma ehlangana nabo emgwaqeni.
IBucs izobhekana neMamelodi Sundowns kwi-quarter final yeNedbank Cup namuhla ngoLwesine ngo-18h00 eLoftus Stadium, ePitoli.
Lo mdlalo ubhekwe ngabo-mvu ngabathandi bebhola kwazise kade ulokhu uhlehla nge-nxa yokuthi la makilabhu abematasa nemidlalo yeCaf.
Namuhla kuphela amaphu-pho njengoba kufanele lishone sekucacile ukuthi ngubani oyowasha ijezi.
UZinnbauer ekhuluma nabe-zindaba izolo ekuseni eGoli udalule okufunwa ngabalandeli kuyena uma bembona em-gwaqweni.
“Silindele umdlalo oseqo-phelweni eliphezulu kwiSundowns ngoba bayiqembu elihle futhi basefomini.
“Kodwa-ke nathi sinabo aba-dlali abaseqophelweni eliphezulu abangawunqoba lo mdlalo.
“Asizona izimfivilithi impela kodwa kulo mdlalo kungenzeka noma yini.
“IPirates yikila-bhu enkulu, nga-so sonke isikha-thi idlalela uku-nqoba izinkomishi.
“Uma ngizihambela nje em-gwaqweni ngihlangana nabala-ndeli bangitshela ezinhlamvini zamehlo ukuthi bayayifuna ne-Nedbank.
“Ngiyabatshela ukuthi ama-phaphu phansi ngoba kuneba-nga okufanele ulihambe ukuze unqobe lo mqhudelwano.
“Kodwa-ke abafana bami bayakwazi okufanele bakwenze kulo mdlalo futhi nginethemba lokuthi sizophumelela,’’ kusho uZinnbauer.
Uthi ubambe umoya ngoThe-mbinkosi Lorch olimele.
Uthi ulinde odokotela okuyibona abazosho ukuthi uzoba yingxenye yalo mdlalo noma cha.
UHappy Jele ongukaputeni weBucs uthi bona bengabadlali bayayihlonipha iSundowns kodwa abayesabi.
“Uma udlalela iPirates umthwalo ohlale usemahlombe akho ngowokuthi kufanele nga-so sonke isikhathi unqobe izi-nkomishi.
“Siyayihlonipha iSundowns idlala kahle e-Afrika kodwa asinalo naka-ncane uvalo ngayo.
“Imimoya iphezulu ekilabhini, wonke umuntu uwulangazelele lo mdlalo.
“Njengokaputeni wekilabhu osinqobile lesi sicoco phambilini kungumthwalo wami ukuthi ngikhuthaze laba badlali abasebancane ngibatshele ngobumqoka bokunqoba izinkomishi.
Siyinqobile iMTN8 kodwa lokho seku-ngumlando abalandeli bahlale belangazelele inkomishi entsha ngaso sonke isikhathi,’’ kusho uJele.
Ozonqoba lo mdlalo uzobhekana neTshakhuma Tsha Madzivhandila ngeSonto ngo-15h00.
Nguyena ozodlalela ekhaya.
Previous articleGrade 9 Learners Competition
Next articleUthembisa lukhulu umqeqeshi weChiefs